घर एशियाई फुटबल स्टोरीहरू यसका लागि उनीहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराईन्छ
एलबी पूर्ण फुटबल प्रतिभा को प्रस्तुत गर्दछ जसले सर्वोत्तम उपनाम द्वारा जान्छ; 'जनावर'। हाम्रो Nemanja मोटिक बचपन स्टोरी प्लस अनलल्ड जीवनी तथ्य तपाईले आफ्नो बचपनको समय सम्मको उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खातासम्म ल्याउनुहुन्छ। विश्लेषणमा प्रसिद्धि, पारिवारिक जीवन र उनीहरूको बारेमा धेरै ज्ञात तथ्याङ्कहरू धेरै र बन्द र अन-पिच भन्दा पहिले आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ।
हो, सबैले आफ्नो क्षमताको बारेमा चिन्ता छ तर केहीले निमेजा मिती जीवनी बुझाउँछन् जुन धेरै रोचक छ। अब थप adieu बिना, सुरु गर्न दिन्छ।
निमेजा मोटिक बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: बाल्यकाल
Nemanja Matic, अगस्तको 1st, Sabac मा 1988, Dragan Matić (बुबा) र बिज्जाना Matić (आमा) द्वारा दुवै SF युगोस्लाविया मा जन्मिएका थिए जो दुवै एथलीट थिए।
Matić मकईमेनियाई मूल को हो जुन यूगोस्लाभिया र आज को एक भाग थियो सर्बिया। दोस्रो विश्व युद्धको उनको आमाबाबु बचपन सर्वेयर थिए। बोस्निया र हेर्जेगोविना, क्रोएशिया, म्यासिडोनिया, मोंटेनेग्रो, सर्बिया र स्लोभेनिया एकपटक युगोस्लाभको रूपमा एकताबद्ध भएको थियो।
उहाँले आफ्नो भाइ, उ्रोस जसको साथमा आमाबाबुबाट एथलेटिकवाद विरासत प्राप्त भयो।
निमेजा मोटिक बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य:युवा क्यारियर
युवाले आफ्नो क्यारियरलाई पाँच वर्षको उमेरमा (1993) व्रेलो फुटबल क्लबको साथ शुरु गरेको थियो जुन त्यो समयमा आफ्नै बुबाले प्रशिक्षित गरेका थिए जसले आफ्नो पहिलो पुत्रको आफ्नो राम्रो क्यारियरको आधार बनायो। 10 उमेरमा, म्याटिक्सका आमाबाबुहरूले साहसी कदम चाल्न अनुमति दिनुभयो जसले उहाँलाई आफ्नो पिताको हस्तक्षेप बिना क्यारियरको सामना गर्न घर छोड्यो। Obrenovac 1905 वर्ष 1999 मा उनको पहिलो गन्तव्य थियो।
न्यान्जाजा मोटिक बचपन कथा
"[घर छोडेर] मेरो लागि गाह्रो थियो किनकी म केवल9थियो," उनले थपे। "सर्बियामा मेरो युवा क्यारियरबाट यो ठूलो कदम पनि थियो। यो मेरो गृहनगरको नजिक थिएन त्यसैले म हरेक सप्ताहांत फिर्ता आउन सकिनँ र जब तपाईं9को एक केटा हुनुहुन्छ, तपाईलाई पीडा महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। पछि, चीजहरू सामान्य भए। फुटबल मेरो काममा रह्यो र म यसलाई आनन्दित गर्दछु। मेरो परिवारको सहयोगले मद्दत गर्यो। मेरो सपना फुटबल खेल्न चाहने सपना एक सफलता बन्यो "
पछि उहाँले3मा विभिन्न युवा फुटबल क्लबहरू अर्थात् रेड स्टार बेलग्रेड, ओब्रेनोभक 1905, रेड स्टार बेल्रिडेड, पार्टिजान, जेडिन्टिवो यूबीमा आफ्नो युवा क्यारियर जारी गर्नुभयो। यो 1997 मा 2005 को बीचमा भयो। यसका क्लबमा उनको सफलताको लागि उनको बुबाको शुरुवात शिखर थियो। मट्याट धेरै कठिन प्रशिक्षणको लागि जानिएको थियो र सबै माथि उल्लेख गरिएको क्लबहरूको लागि उत्कृष्ट खेलाडी पनि। वर्ष 1997 देखि 2005 वर्षहरू उनी धेरै लामो भयो।
निमेजा मोटिक बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य:व्यावसायिक क्यारियर
कोल्बुराले उनको उत्कृष्ट प्रदर्शन देखाएको थियो, जहाँ उनले वर्ष 2005 मा आफ्नो व्यावसायिक क्यारियरको शुरुआत पाए। उनले तीन वर्षसम्म क्लबमा खेलेका थिए, तर यो ग्यारह ग्यारेन्टीमा मात्र स्थान लिन थालेको थिएन, केवल 16 उपस्थितिहरू बनाउँथे। त्यसैले दुर्भाग्यवश युवा बालकको लागि जसले आफ्नो अनुभवलाई अन्ततः एक खडामा आउँथ्यो।
यसको दुर्व्यवहारमा टाँस्नुको सट्टा उहाँले स्लोवाक क्लबमा आफ्नो स्थानान्तरण शुरु गर्नुभयो Košice 2007 मा जसले उहाँलाई मन परायो।
साथै, देशमा बस्ने बेला, उहाँले स्लोवाक नागरिकता पनि प्राप्त गर्नुभयो।
वास्तवमा, क्लबको साथ समय बित्यो खेलाडीको लागि धेरै भाग्यशाली भयो, कोचले उनलाई एक धेरै सम्भावित खेलाडीको रूपमा मान्थ्यो र उनीहरूलाई मैदानमा प्राय। कुल मिलाएर, सर्बेरले 70 उपस्थित बनायो र दुई सीजनमा गोल गर्दै टोलीका लागि गोल गर्यो। तिनको मर्ने-कठिन मनोवृत्तिले उनको ढोकाको ढोका खोल्दै चेल्सी एफसी स्काउट्सको नेतृत्व गर्यो। त्यो समय मा मेबलले प्रतिस्थापनको लागि चेल्सी गम्भीर खोजीमा थियो।
न्यान्जाजा म्याटिक युवा क्यारियर
खास गरी 2009 मा, चेल्साबाट स्काउट्सले माटीको रुचि राखे। ग्रीष्मकालीन 2009 मा, एक दुई-वर्ष सम्झौता हस्ताक्षर गरियो। लण्डन क्लबमा जीवनको सुरुवात धेरै सफल थिएन, किनकि उसले मात्र प्रायः एक उपको रूपमा देखा पर्यो।
उनको शब्दहरुमा, "म धेरै जवान थिएँ," तिनी सम्झन्छन्। "मेरो स्थानमा त्यो समय ठूलो खेलाडीहरू, बलबैक, लम्पार्ड र एसेनन थिए। म यहाँ घाइते भए - म चार महिनाको थिएँ - त्यसैले यो मेरो लागि गाह्रो थियो। युवा खेलाडीहरूको लागि प्रिमियर लिग सजिलो छैन किनकि यो धेरै गाह्रो छ, धेरै गाह्रो छ। "
"एक स्लोवाकिया टोली बाट प्रिमियर लिगमा आउन सजिलो छैन। मेरो लागि यो एक सपना जस्तो थियो, तर म जवान थिएँ र यो राम्रो अनुभव थियो। "
म्याटिकलाई भेट्न उनी खुशी भए कि उनी भिटेसलाई .ण लिने छन्। चेल्सी र भिटेसी बीच एक निवास थियो जहाँ लन्डन क्लबका केही फुटबलरहरूले एक मौसममा डच क्लबको एकेडेमीमा एक कसरत प्राप्त गर्न सक्थे।
Nemanja 2010 / 2011 सिजनले अस्थायी क्लबसँग बिताए, 27 म्याचहरूमा दुई गोलहरू सेट गर्दै। उनको शब्दहरुमा, 'पोर्चुगलमा म साना खेलाडीहरू विरुद्ध खेल्दै थिएँ र मैले हरेक बल जिते। यो ठूलो लीगमा ठूलो खेलाडी भन्दा मलाई मेरो लागि अझ सजिलो थियो। '
यो पोर्तुगलमा थियो कि उनको क्यारियर परिवर्तन भयो, कोच जर्ज यीशु द्वारा।
ग्रीष्मकालीन 2011 मा, सर्बिया फुटबलरले आफ्नो जीवनमा बलियो निर्णय लिने निर्णय गरे। कहिल्यै उधारो लिने प्रयास।
म्याटिकले बेनिफिकालाई स्थानान्तरण गर्नुभयो। तपाईं डेभीड लुइज पाउन चेल्सी द्वारा एक चाराको रूपमा प्रयोग नगर्ने, उनी क्लब छोडेर सन्तुष्ट महसुस गर्थे। उनले तुरुन्तै पहिलो टोलीमा र 95 म्याचहरूमा विशेष गरी राखे र केवल तीन सीजनमा पोर्चुगल क्लबको लागि9लक्ष्यहरू गोल गरे। क्लबको लागि खेल्दा मटाइले अविश्वसनीय देख्यो। यूरोपा लीग फाइनलमा उनको चेल्स चेल्सी सामना गर्दै। तिमी पनि उनको टीम को हानिकारक तरिका देखि, उनले यकीन छ कि उनले डेविड लुइज संग डेल्थ। यसले चेल्सीलाई उनीहरूको हितलाई पुनरुत्थान गर्न, यो समय उसलाई पहिलो छनौट खेलाडी बनाउन प्रतिज्ञा गरेको छ।
डेभिड लुइजसँगको सम्बन्धमा मोटिक
यो सबै जनवरी 2014 मा भयो जब चेल्सी सर्बिया फिर्ता फिर्ता लिन को लागि एक चौंकाने वाला चाल को लागि र उनको लागि € 25 मिलियन भुगतान। बाँकि, (म्यानचेस्टर युनाइटेडको लागि उनको चाल) जस्तै तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो।
निमेजा मोटिक बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य:पारिवारिक जीवन
नांजाजा मौलिक एथलीटहरूको समृद्ध पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट आउँछ। तिनका आमाबाबुहरू डगगन र बिज्जानाले आफ्नो देशलाई खेलमा गर्व गरे। म्याटिक्सका पिता एक पेशेवर फुटबलर थिए, सर्बियामा 1980s मा एफके मक्कावा साबाकका लागि खेल्ने।
Matić को साना भाइ, Uroš, एक पेशेवर फुटबलर पनि छ जो कि डेनिश चैंपियन एफसी कोपेनहेगन को लागि खेल को समय मा खेलिन्छ। उर्स 'क्यारियर पथ तिनको भाइको जस्तै रहेको जस्तो छ किनभने दुबै जोडीहरूले आफ्ना बुबाद्वारा प्रशिक्षित गरेका छन् र उनीहरूको फरक तरिकामा गए।
उरुष् मिकीको कथा
एक पल्ट एक पल्ट, मिडफिल्डर आफ्नो भाइ को सामना गर्ने संभावना द्वारा धेरै उत्साहित भयो चेल्सी च्याम्पियन लीगमा टोली यो सानो मोटिक थियो जो हारमा समाप्त भयो।
जब Nemanja Matic भाइ, Uroš साथ घुमाईयो
युरोस एक पटक न्यान्जाजाको सफलता संग पकडने प्रयास गरे तर असफल भयो र अझै पनि आफ्नो भाइको छायामा फसेको छ। उहाँले आफ्नो जेठो भाइलाई सपना जिउँदै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ।
तिनका शब्दहरूमा 'न्यान्जाजा मेरो भाइ हुन सक्छ तर म आफ्नै आफ्नै खेलाडी हो जुन एफसी कोपेनहेगनमा मेरो आफ्नै स्वर्गीय सपना देखाउँदैछु। मलाई लाग््छ कि म यहाँ यस क्लब मा एक राम्रो स्थान को खोज र आफु को लागि एक ठूलो नाम बनाउन सक्छ " उसले भन्यो लक्ष्य.
दुबै जोडीहरूले छुट्टै बिताएकाहरूलाई छुट्टै साथीहरूको साथ साथ 'एक फुटबल' तिनीहरूको पक्षद्वारा।
शुभ ब्रदरहरू - नमानजा र उरु मोती
निमेजा मोटिक बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य:सम्बन्ध जीवन
उनको पहिलो हिज्जेमा चेल्सी, एक समयले धेरै कठिनाइहरू देखाए, मट्याटिकले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनलाई मौका दिन निर्णय गरे। उहाँले भेट्नुभयो र अलिलाण्ड्रा पावीको साथमा प्रेम गर्थे जसले पनि आफ्नो देशको मूलबाट आउँछ।
Nemanja म्याटिक रिटाइट लाइफ
तिनका शब्दहरूमा 'मेरो सबैभन्दा उत्कृष्ट उपलब्धि मेरो लागी एलिजाण्ड्रलाई विवाह गर्न उत्प्रेरित गर्न सक्ने क्षमता थियो।। दुवै जोडीले 2010 मा गुप्त विवाह गरेको थियो।
मोटिक वेड्स Aleksandra
न्यान्जाजा म्याटिकलले अलेक्जान्ड्राको विवाहलाई साँच्चै आफ्नो क्यारियरमा सफलता ल्यायो। उनले उनलाई आवश्यक प्रोत्साहन दिनुभयो। उनीहरूको खण्डमा उनको खण्ड र उनको उत्तेजना छैन। दुबै सँगै धेरै सफल क्षण सँगै साझेदारी गरेको छ।
Aleksandra Pavić आफ्नो पति संग मनाता छ
न्यान्जाजा र अलेक्लाण्ड्रा विवाहले यसको आशिष् प्राप्त गरेको छ। तिनीहरू दुवैको छोरा छन्।
तल उनीहरूको तस्वीर हो एक सम्पत्ति एजेन्सी एजेन्सीमा हेर्दै तिनीहरू लन्डन देखि म्यानचेस्टरबाट फर्किने तयारीमा छन्।
न्यान्जाजा म्याटिकल र उनको जीवनको प्रेम
निमेजा मोटिक बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य:आफ्नो गाँउको डिप्स बन्द गर्दै
उहाँ उनको उदारतापूर्वक फिर्ताको लागि चिनिनुभएको छ मार्सेडोनियाका साबाक घरको शहरमा, सर्बिया। उनले आफ्नो गाउँलाई आफ्नो पुरानो विभाग फिर्ता तिर्न मद्दत गरेको छ।
Nemanja Matic Pays off Village Dept
म्याटटिकले आफ्नो पुरानो क्लब ओबेरनोभक 1905 लाई पनि दिएका छन्। उनले क्लबमा एक संग्रहालय दान गरे।
Nemanja Matic Donates Museum पुरानो क्लबमा
निमेजा मोटिक बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य:स्पेशल वनसँग पुनरुत्थान
उनको पूर्व मालिक संग पुनर्मिलित गर्न को लागी मटाइट प्रसन्न थियो Jose Mourinho.
In जोस मोरहोइनको शब्दहरू; "म उहाँसँग सामेल हुन चाहानुको लागि उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु किनकि यसको बिना, यहाँ यहाँ असम्भव हुनेछ। मलाई यकीन छ कि हाम्रा खेलाडी र समर्थकहरूले उहाँलाई प्रेम गर्नेछन्। हाम्रो नयाँ नम्बर 31 मा ठूलो स्वागत छ। "
मौलिक शब्दहरूमा; "म म्यानचेस्टर युनाइटेडमा सामेल भएको छु," उनले थपे। "जोस Mourinho संग काम गर्न एक पटक फेरि एक अवसर थियो म बन्द गर्न सकेन। यो क्लबको लागि एक अत्यन्त रोमाञ्चक समय हो र म यो उत्कृष्ट क्लबको लागि थप इतिहास सिर्जना गर्न मेरो भाग खेल्नको लागि इच्छुक छु। ""
Jose Mourinho र न्यान्जाजा म्याटिकको प्रेम एक-अर्काको लागि दोस्रो होईन।
Nemanja Matic र जोस Mourinho को बीच बन्ड
Mourinho ध्यान दिए पछि म्याटिक को लागि उनको पीछा मा हरियो लाइट देखे एन्टोनियो कन्टईको त्यसो भएन Tiemoure Bakayoko, एन'कोलो कान्टा.
निमेजा मोटिक बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य:एक पुरानो साथीबाट सहयोग प्राप्त गर्दै
मितिकलाई अर्को पूर्व द्वारा आफ्नो पहिलो प्रशिक्षण सत्रको स्वागत छ चेल्सी खेलाडी -जुआन मटा जसले उहाँलाई चारैतिर देखाउनुभयो र उसलाई सुत्न मद्दत गर्यो।
Nemanja मोटिक पुनर्मिलन एक पुराना साथी संग
मौलिक र माटा चेल्सी एफसी मा आफ्नो जादू को समयमा साझा करीबी मित्रता।
निमेजा मोटिक बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य:कार विकल्प
अन्तमा म्याटिकको बारेमा कुरामा उनीहरूको कार विकल्प हो। हरेक क्लबको लागि उसले जान्छ, त्यो कम्तिमा एउटा कार छ जुन क्लबको जर्सीको रूपमा एकै रङ छान्छ। यो दुवैको लागि मामला हो चेल्सी र म्यानचेस्टर युनाइटेड
क्लब रंगहरू मेल खाने म्याटको कारको छनोट
उहाँ मर्सिडीजको प्रेमी हुनुहुन्छ जब ठूलो गाडी चलाउनु हुन्छ।